Vaovao - Fa maninona no nanao premiere Avengers Endgame tany Shina
Fa maninona no nanao premiere Avengers Endgame tany Shina
Ny famoahana voalohany ny “Avengers: Endgamer” eran'izao tontolo izao dia any Shina, roa andro mialoha ny famoahana azy any Amerika Avaratra, izay vokatry ny fifantohan'i Marvel amin'ny tsena sinoa. Mamorona ny rakitsary taloha momba ny sarimihetsika Marvel any amin'ny tanibe Shina, ny “Avengers: Infinity War” dia mety hahazo 800 tapitrisa dolara any amin'ny biraon'ny boxe eto, sary iray izay tsy azon'i Marvel nolavina.
Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fahafahan'ny mponina any Shina sarimihetsika manana herijika goavambe ho an'i Marvel. Iray amin'ireo tanjona lehibe kendren'ny Marvel Studios ny hahazo mpijery sinoa maro kokoa izay tsy nahalala na nifantoka tamin'ny sarimihetsika Marvel talohan'ny nandehanany tany amin'ny sinema, manomboka mijery Marvel sarimihetsika, ary fantaro sy ho tianao ny kolontsain'ny sarimihetsika Marvel.
Tsy azo odian-tsy hita, ireo horonantsary ireo matetika no farany navoaka tao amin'ny tanibe Shina, izay midika fa nisy ampahany lehibe tamin'ny vola miditra amin'ny boaty miafina nahena tokoa. Tsy misy isalasalana fa lasa hery lehibe tao amin'ny boaty any ivelany i Sina. tsenan'ny birao ho an'ny sarimihetsika vahiny.
Na i Stan Lee, rain'ny Marvel Comics aza, dia naneho fihetseham-po mitovy amin'izany, tamin'ny filazany fa “i China no ho ivon'ny horonantsary sy fahitalavitra eto an-tany.” Azo antoka, ny Don dia miorina amin'ny didim-pitsarany ny zava-bitan'ny boaty taloha an'i Shina sy ny vahoaka goavambe goavambe.
Avengers: premiere Endgamer any Shina, mino aho fa nahita ny herin'ny tsenan'i China ny Marvel, ary tsy nandiso fanantenana azy ireo ihany koa ny biraon'ny boxe China, ny hafanam-pon'ireo mpankafy an'i Sina dia goavana sy tsy manan-tsahala, maro ny olona manenjika an'i Marvel folo taona, farany miandry ny ady lehibe indrindra I, ny vokatry ny fijanonana farany dia bevohoka alahelo, ny tena malahelo noho ny mpitondratena mainty, ary izy dia maherifo foana, Tsara ny mahatadidy fa maty izy tamin'ny farany.
Misaotra betsaka noho ny asa tsara izay efa nataon'i Marvel nandritra ny taona maro. Mamela antsika, olon-tsotra, hikasika ny akanjon'ny maherifo, andao isika handeha amin'ny fiainan'ireo maherifo, hahatsapa ny fifaliany sy ny alahelony, ary amin'ny farany dia hitahy ireo mahery fo rehetra ao amin'ny Marvel!